Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa speaks at a press conference in Harare, Zimbabwe. Photo by: Shaun Jusa/Xinhua
HARARE - Zimbabwe has postponed its 40th independence anniversary celebrations scheduled for April 18, as well as other public gatherings and international sporting events as part of efforts to contain the spread of the coronavirus (COVID-19).
In an update to the nation Tuesday, Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa declared COVID-19 a national disaster, saying the country had escalated its national response to the virus after neighbouring countries in the region had reported cases.
The country's premier trade showcase, the Zimbabwe International Trade Fair, national independence celebrations and pending international sporting fixtures had been postponed until the threat of coronavirus recedes, Mnangagwa said.
He said as part of measures to avoid spread of the disease, the country was encouraging travellers from high-risk countries to postpone visiting the country for the next 30 days from March 20, 2020.
The country was also discouraging Zimbabweans from travelling to, through and from high-risk countries during the same period, he said.